Amanyathelo okwenza ilogo elungileyo yohlobo okanye imveliso | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Ukuyila umfanekiso wequmrhu akukho lula, Kuya kufuneka ugcine okuninzi engqondweni ukuba ilogo yethu isebenze ngokufanelekileyo. Inkqubo ye- amanyathelo okwenza ilogo elungileyo uphawu okanye imveliso baya kusinceda ukuba sifike kwisiphumo esibonakalayo esikufutshane nesiphumo esisebenzayo. Asimele silibale ukuba ilogo iya kumela yonke into yintoni uphawu, malunga nenxalenye ebonakalayo (yento ebonakalayo, oko kukuthi) eya kuthi ibonakaliswe kwihlabathi, njengoko iya kuba yile nto abantu bayibonayo xa bethetha negama lethu. Kuya kufuneka sibenazo ezinye izinto ezikhoyo xa sisenza uphawu, ukusuka kulo -nombre yenziwe kwi Inkqubo ye amagama kude kube Ukufaka uphawu ukwenza yonke loo nto Umzobo wendalo omele ukuba yintoni uphawu. Ungayibona le nto isikhundla ukuba ufuna ukwazi indlela yokwenza into elungileyo ukubiza.
I-logo elungileyo kufuneka ifundwe kakuhle ukuhlangabezana iinjongo zakho rbonakalisa uphawu ngendlela efanelekileyo kunye nokubanakho ukurekhodwa ezingqondweni zabasebenzisi abazibonayo, ungalibali ukuba ilogo ngakumbi elula ngokulula kuya kuba lula ukukhumbula. I-Coca-Cola, iMcdonalds, i-BMW, ​​kunye nolunye uluhlu lweemveliso lubonakala lula ukukhumbula. Funda ngendlela yokwenza uphawu olusebenza ngokwenene.
Into yokuqala ekufuneka siyazi xa isiza yenza ilogo elungileyo es sazi uphawu lwethu okanye imveliso, yazi ukuba injani, yenza ntoni kwaye zeziphi izimvo eziphambili. Oku kubalulekile ukufezekisa iziphumo ezilungileyo kuba ilogo ayisiyododo elula kodwa umfanekiso omele uphawu, ngenxa yeso sizathu kufuneka wazi yonke into enokwenzeka.
Ukufikelela kwifayile ye- efanelekileyo Kuya kufuneka sigcine ezi ilebhile zincinci engqondweni:
Sebenzisa imibala embalwa (2-3)
Yazi ukuba uphawu luza kuhlala phi (inkxaso)
Yenze ivelise kwakhona (ubukhulu kunye nemithombo yeendaba)
Ayilayishwanga kakhulu ngezinto (ezilula)
Gwema ukusebenzisa iigradients kunye neziphumo
Soloko usebenza nabathengisi (iinkqubo zevektha)
Kuya kufuneka sazi kwangaphambili ukuba ufuna ntoni umele uphawu lwethu. Kukho iintlobo ezahlukeneyo zokubonakaliswa kwemifanekiso ezisebenzela iinjongo ezahlukeneyo, kule posi siza kubona ifayile ye- Iindidi zemizobo ebonisa uphawu lophawu ekhoyo. UNorberto Chaves Ithiyori ngalo mbandela, kunye neeparameter zakhe esinako Chaza uphawu ngokuchanekileyo.
Kukho iikhonsepthi ngokubanzi ezisetyenziswayo yiza nelogo elungileyoNjengomgaqo oqhelekileyo, ezi ngcinga zihlala zisebenza ubuncinci zichaza uphawu ngohlobo oluchanekileyo. A ukufundeka kakuhle, Ukusetyenziswa okuhle kwee-shades esekwe kwi ubuchwephesha bengqondo, ukulula… Namanye amanqaku esiza kubona ngezantsi.
1 Amanqaku abalulekileyo
1.1 Iyafundeka kwaye iyacaciseka
1.2 Kunqande ukubhala ngesandla okubhalwe ngesandla
1.3 Ukuzaliswa kwakhona kwiinkxaso ezininzi
1.4 Kulula ukukhumbula
Iyafundeka kwaye iyacaciseka
I-logo elungileyo kufuneka ibe nakho iyafundeka kwaye ichazwe ukuze abasebenzisi bakwazi ukuba yeyiphi na into kwaye bakwazi ukuyikhumbula ukuya kuyo kwixa elizayo. Kwifoto engezantsi sibona ilogo ejongeka kakuhle ibukeka buhlel (ngokuqinisekileyo inomdla) kodwa ayisiyiyo yonke into ekufuneka ibe yinxalenye enomtsalane kodwa nayo isebenze kwaye uzalisekise eyona njongo iphambili yophawu: dlulisa umyalezo kwaye ukhunjulwe. Kule meko uphawu luno isakhiwo sokufunda esintsonkothileyo-Imibala emininzi kakhulu, izinto ezigqagqeneyo, kunye nolawulo oluphezulu ekunzima ukulufunda. I-logo imele isiqithi saseLanzarote (Canary Islands) oku kufunda kuyanzima kuba ukuba asilazi elo gama sinokufikelela kolunye ufundo olufana noLanroteza. Inomtsalane kodwa yenziwa ngokungachanekanga. Ke ngoko xa siyila ilogo kufuneka sicinge ukuba umsebenzisi akayazi uphawu kwaye ke kufanelekile ukuba ifundeke kwaye iqondakale lula.
Kunqande ukubhala ngesandla okubhalwe ngesandla
Enye ukufundeka ngokuchanekileyo ku funeka kuthintele nanini na xa sinokusebenzisa iifonti ebhalwe ngesandla ezilinganisa ukubhala kwabantu. Ukuba kuyinyani ukuba ezinye iimveliso zisebenzisa olu hlobo lohlobo kwaye luyasebenza, kodwa kufuneka silumke ukuba iyasebenza ngokwenene. Soloko ujonga ukuba semthethweni.
Ukuzaliswa kwakhona kwiinkxaso ezininzi
Xa sisenza umzobo obonakalisayo uphawu kufuneka Yazi apho uphawu luya kuhlala khona, I-logo ye-APP ayifani nelogo yesikhephe. Utshintsho lwezibiyeli, izixhobo zohlukile kwaye ukufundeka kuyahluka isekwe kuyo yonke le nto. Ukwazi apho uphawu luza kuhlala khona yinto ebalulekileyo kuba uyilo lwethu lwekhusi lunokuba luhle kakhulu kodwa emva kokuba lisiwe kwinkxaso yalo ephambili liphelelwa ngamandla. Umzekelo woku sikubona kulwakhiwo ngokutsha lwe-logo ye-instagram, le logo ibalasele ngokusetyenziswa kwegradient phakathi kwemibala eliqela, isebenza ngokuchanekileyo kwiscreen kodwa masicinge umzuzwana ukuba i-instagram kufuneka ikrolwe kwisitya sensimbi ngokufanayo nezo zemijelo yogutyulo, iya kuphulukana ngokupheleleyo nenxalenye ebonakalayo ebangele ukuba ibonakale. Kufuneka sihlale sisazi luza kuhlala phi uphawu ngaphambi kokwenza isazisi sakho.
Omnye umzekelo olungileyo omele umbono wokwazi luhlala phi uphawu Le yimeko yamakhaka emoto. Ezi mpawu kufuneka zibe nomtsalane ikakhulu kule nkxaso kuba kulapho benokuthi baboniswe khona kuluntu. Ukwazi oku, uphawu lwegraphic kwakufuneka lube nomtsalane kule nkxaso yentsimbi.
I-logo elungileyo kufuneka kube lula ukuyikhumbula: thintela umthwalo wokubonwayo, ungasebenzisi imibala emininzi kunye nolwakhiwo olulula zezinye ze amanqaku asisiseko kube lula ukukhumbula. I-Nike ngumzekelo olungileyo woku, kulula kwaye kulula ukukhumbula.
Ukuze umfanekiso obumbeneyo ukhunjulwe, Ukulula kweefom, khangela into enokuthi xa iyonke ibe nomtsalane kwaye ikhunjulwe ngokulula. I-logo yeCoca-Cola inzima kakhulu xa kuthethwa ngokuchwetheza, kodwa xa iyonke kulula ukuyikhumbula ngenxa yobume befonti.
Omnye umzekelo we logo ekhunjulwa kakuhle kakhulu yile iapile kunye neapile yayo edumileyo njengomzobo wegama layo. Le nkampani isebenzisa iapile njengeyona nto iphambili emfanekisweni wayo ngendlela yokuba umsebenzisi sele esazi ubume be icon, evumela oku ukuba kukwazi ukutshintsha umxholo kwaye uhlale ufundeka. Oku kufezekiswa ngenxa into yokwazisa, Ingqondo yethu iyayiqonda imbonakalo yeapile kwaye sele iyinxibelelanisa nophawu ngaphandle kokugcwalisa ukugcwaliswa kwalo.
Ukwenza ilogo kuyinkimbinkimbi lonto ithatha lukhulu isifundo sangaphambili y cwangciso ukuza nesindululo esisebenza ngokufanelekileyo. Lwazi uphawu lwethu kwaye apho ufuna ukuya khona kubalulekile ukwenza ilogo elungileyo. Into efanelekileyo ngaphambi kokuqala ukwenza i-logo yile bona iimbekiselo ezininzi ukufumanisa ukuba ezinye iimveliso zisombulule njani le ngxaki. Unokufunda esinye isithuba sendlela yokwenza ilogo elungileyo kule unxibelelwano.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Idizayini yeMifanekiso » Amanyathelo okwenza ilogo elungileyo yohlobo okanye imveliso
Molweni, nceda, ungathatha ezi zikwere zincinci kwi-tiwiter, ityhubhu, facebook, kunye ne-google clud…, kuba bayakukhathaza kwaye abavumeli ukuba ubone okanye ufunde inqaku lakho elinomdla ngokuchanekileyo. iyacaphukisa kakhulu, enkosi.
Yenza iibrashi zakho zeFotohop kwaye uzilungiselele kwilayibrari yakho